Arabia Saodita: Iftar Ramadany Hitenenana Hoe Lavina Ny Fitsitokotokoana · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita: Iftar Ramadany Hitenenana Hoe Lavina Ny Fitsitokotokoana
Voadika ny 08 Aogositra 2012 4:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, فارسی, Español, বাংলা, English
Nanapa-kevitra ny andian-dehilahy Saodiana iray fa hanitsaka ny fitsitokotokoana ka nikarakara sakafo maraina Iftar nahitàna niaraka ireo avy amin'ny vondrom-piarahamonina Sunni sy Shia.
Ilay fihanonana, teo ambany lohahevitra hoe Lavina ny fitsitokotokoana, dia natao tao Riyadh renivohitra Saodiana. Nakarina teny anaty tambajotra sosialy ireo saripika ahitàna ireo Saodiana avy amin'ireo sekta roa ireo miara-mijoro mankalaza ilay hetsika.
Hassan Al Ameer mizara ity saipika ity ao amin'ny Twitter:
Ao amin'ny Twitter i Hassan Al Ameer no mizara ity saripika ity misy ireo Saodiana Sunni sy Shia miara-mandray ny sakafo marainany taori'ny fifadian-kanina, tao Riyadh
Miatrika iray volana fifadian-kanina izay hifarana afaka folo andro ry zareo Silamo, Ramadany. Mandritra ny Ramadany, mifady ny mihinana sy misotro ry zareo Silamo, manomboka amin'ny fiposahany ka hatramin'ny filentehan'ny masoandro. Ny Iftar dia ny sakafo hanin-dry zareo rehefa hanapahany ny fifadian-kanina, amin'ny filentehan'ny masoandro.
Ny fahombiazan'ny Iftar tao Riyadh dia mandrisika ireo Saodiana hikarakara hetsika toa azy iny manerana ny Fanjakana. Mibitsika i AngrySaudi :
@AngrySaudi: Te-hikarakara hetsika ‘Lavina ny fitsitokotokoana’ any amin'ny Faritany Atsinanana izahay. Iza no hamatsy, hanohana ary hanatrika io hetsika io?
In-200 naverina nalefa io bitsika io.
Betsaka sary momba ny Iftar azo jerena eto, ao amin'ny pejy Facebook-n'ilay hetsika .
Voafaritra toy izao ilay tahirin-tsary :
Andian-dehilahy Saodiana tanora, avy amin'ny sekta Sunni sy Shia, no nanaiky hikarakara Iftar iraisana, eo ambanin'ny lohahevitra hoe Lavina ny fitsitokotokoana. Ny tanjona dia ny handefa hafatra ho an'ny tsirairay hilazana fa hoe isika rehetra dia mpirahalahy ao anatin'ny maha-olona antsika, sy Silamo avy amin'ny firenena rehetra, ary lavintsika ny fizarazaràna, tohanantsika ny firaisana.